Apple MacBook | Esi m mac
A ga-echeta March 9, 2015 maka mwepụta nke ọhụrụ MacBook, ee, aha nke kọmputa Apple ọhụrụ a bụ: MacBook.
Anyị na-eche ihu laptọọpụ Apple nwere oke ọhụụ na-enweghị atụ na anyị nwere ike ịsị na anyị na-eche ihu Macn kacha mkpa mara oge, karịa karịa obere MacBook Air. MacBook a nwere 13,1mm gbara ọkpụrụkpụ, dị naanị 0,9kg ma nwee ngosipụta 12-inch Retina nke ahụ ga-atọ ndị ọrụ ụtọ.
Ihe ọzọ dị na Macbooks ndị a bụ trackpad mgbanwe, Force Touch. Trackpad ohuru a na - agbakwunye akara edo edo na ihe ntanetị ọhụrụ ka agbakwunye iji chọpụta ike nke onye ọrụ mgbe ịpị ya. Nnwere onwe nke awa 9 dika Apple n'onwe ya na ohuru na otu ọdụ ụgbọ USB-C ụfọdụ n'ime nkọwa nke MacBook ọhụrụ a.
Anyị nwekwara ike igosi na Apple na-ewepu njirimara backlit logo na azụ nke ihuenyo ahụ, ndị otu ọhụụ a na-agbakwunye otu yiri nke ahụ dị na iPads ugbu a ma ọ dị na agba atọ: Silver, Ohere Ohere na Gold.
Ozi banyere MacBook ohuru
Lee ị nwere ike ịhụ ozi niile na-apụta kwa ụbọchị gbasara Apple MacBook ọhụrụ.
Ịre MacBook na Q2020 XNUMX karịrị ọtụtụ laptọọpụ PC
por Tony Cortes eme Ọnwa 4 .
Mgbe Craig Federighi gosipụtara anyị akwụkwọ mbụ nke Macbook nke Apple Silicon era, otu afọ gara aga na…
por Manuel Alonso eme Ọnwa 6 .
Ọ bụrụ na ikike ikike Apple niile ghọrọ eziokwu, karịa kọmpụta anyị ga-enwe dị ka obere ọgụgụ isi n'aka anyị….
por Jordi Gimenez eme Ọnwa 7 .
Ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe efu nke nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Apple iji kpuchie nsogbu niile ...
MacBook Air 2022 nwere ike jiri aha… ọhụrụ bịa
por Manuel Alonso eme Ọnwa 7 .
A na-atụ anya na ikuku MacBook ga-emezigharị ya n'oge. The slimmest nlereanya na ...
Apple ga -enwe ike ree 80% nke ngụkọta laptọọpụ ARM n'ahịa n'afọ a
por Tony Cortes eme Ọnwa 7 .
Obi abụọ adịghị ya na ntinye Apple na oge ọhụrụ nke Apple Silicon Macs abụrụla…
Apple na-enyocha ndị ọrụ MacBook 12-inch
por Tony Cortes eme Ọnwa 10 .
Apple nwere ike na-eche maka ịmalitegharị MacBook nke anụ ọhịa 12. Ọ malitere ya na 2015 na ...
Ọtụtụ ndị ọrụ na -akọ akụkọ gbasara ihuenyo na -adịghị ahụkebe na MacBooks Apple Silicon ọhụrụ
Ọtụtụ ndị ọrụ na -akọ otu nsogbu ahụ na MacBooks ha na netwọkụ mmekọrịta: ihuenyo na -agbaji na -enweghị ...
MacBook 12 nke anụ ọhịa ahụ gbakwụnyere na ndepụta nke "Vintage" nke Apple
por Jordi Gimenez eme Ọnwa 11 .
Ndị ụlọ ọrụ Cupertino ka tinye MacBook Retina na ...
MacBooks nwere obere ihuenyo LED agaghị abịa ruo mgbe 2022
por Ụlọ Ignatius eme Afọ 1 .
Site na mwepụta nke 12,9-inch iPad Pro na ngosi mini-LED, ọtụtụ ndị ọrụ na-eche mbata ...
Ihe omume klas mbụ megide Apple maka itinye ya na keyboard urukurubụba na MacBook
por Manuel Alonso eme Afọ 1 .
Butterfly keyboard ga-abụrịrị na ọ dị njọ maka ya ka ga-aga n'ihu na-ekwu maka ya. Ya mere…
Mgbochi a na-enweghị mmiri nwere ike ime ya na MacBooks
Otu n'ime nchegbu kachasị anyị nwere dịka ndị nwe MacBook (echere m na laptọọpụ ọ bụla, mana ọkachasị ...
Ihe batrị Mac na obodo ndi mepere emepe